myoesetpwor – Page3– My Doctor
myoesetpwor	Admin	2018-04-19T14:22:03+00:00
DrMay ThantSyn	2018-12-31T15:58:22+00:00
အတွင်းခံများကပြောတဲ့ ကျန်းမာရေး ကျနောတို့လို နိုင်ငံအနေနဲ့ အတွင်းခံအကြောင်းပြောရတာ နည်းနည်းထူးဆန်းနေသလိုလို ရှက်စရာလိုလို ဖြစ်နေပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ကြည့်မည်ဆိုပါက ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေသင့်သော ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်သည် ။ ဒါကြောင့် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား (၁) ချည်သားကိုသုံးပါ အတွင်းခံရဲ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ပိုးတွေ ပိုလီအီစတာအသားတွေဖြစ်နေပါစေ အလည်ပိုင်းကို ချည်ဖြင့်သာရှိသော အတွင်းခံမျိုးကို
DrMay ThantSyn	2018-12-31T15:11:26+00:00
မတူညီသော သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်းများ (IUD) သန္ဓေတားနည်းလမ်းများထဲကလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး တီပုံစံလေးကို IUD လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အဖျားမှာ ကြိုးလေးရှိပြီး မိန်းမကိုယ်ထဲကနေ ပစ္စည်းရှိနေ မနေ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် ။ အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တားဆေးကတ်သုံးကြပေမယ့် ဆေးသောက်ဖို့မေ့တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျ
DrMay ThantSyn	2018-12-29T23:23:21+00:00
မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျဉ်းအောင်လိမ်းတဲ့ cream တွေအကြောင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ Vaginal tract (မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း) ကျဉ်းအောင်လိမ်းတဲ့ cream တွေအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ် ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေမှာ သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျယ်လာရသလဲ? 1)ကလေးအများကြီးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးများ 2)သွေးဆုံးပြီးသော အမျိုးသမီးများ 3)ခဏခဏ ဝမ်းချုပ်တတ်သော
Common questions about emergency pills
DrMay ThantSyn	2019-01-02T16:52:14+00:00
အရေးပေါ်တားဆေးနှင့် အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ မေး ၁။ အရေးပေါ်တားဆေးကို ဘယ်အချိန်သောက်ရလဲ? ဖြေ - အတူနေပြီး နာရီ ၁၂၀အတွင်း သောက်ရပါတယ်။ စောစောသောက်လေ အာနိသင်ပိုရှိလေပါ။နောက်ကျမှသောက်လေ အာနိသင်လျော့နည်းလေပါ။ (* အတူနေပြီး ၂၄နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း 95%ရှိပြီး၊ အတူနေပြီး ၇၂နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်နိုငွစွမ်း
DrMay ThantSyn	2018-12-29T23:17:54+00:00
" လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း ပြန်ထုတ်တဲ့အခါ " လက်မောင်းထဲကို သန္ဓေတားပစ္စည်း ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကို အတော်များများသိပြီးကြပြီထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုတစ်ခါမှာတော့ - လက်မောင်းထဲထည့်ထားတဲ့ သန္ဓေတားပစ္စည်းကို ဘယ်တော့ ပြန်ထုတ်မလဲ? - ဘယ်လိုမျိုးပြန်ထုတ်မလဲ? ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါမယ်နော် ဘယ်တော့ပြန်ထုတ်မလဲဆိုရင် - သန္ဓေတားပစ္စည်းရဲ့ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်သွားလို့ ပြန်လဲရမယ့်အခါ -
DrMay ThantSyn	2018-12-28T21:02:21+00:00
All about vaginal pills
DrMay ThantSyn	2018-12-20T10:04:29+00:00
မိန်းမကိုယ်​တွင်း ထည့်သွင်း​​အသုံးပြုရတဲ့ ​ဆေးများအ​ကြောင်း Vaginal suppositories ဆိုတာ မိန်းမကိုယ်​တွင်း ထိုးသွင်းအသုံးပြုရတဲ့ ​ဆေး​တောင့်​အခဲ​လေး​တွေပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ဆေး​တောင့်​​လေး​တွေကို မ်ိန်းမကိုယ်​တွင်း စနစ်​တကျထည့်​ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်​ခန္ဓာရဲ့ အပူချိန်​​ကြောင့်​ အရည်​​ပျော်​သွားကာ ​ဆေးအာနိသင်​ကို ရရှိ​စေပါတယ်​။ မိန်းမကိုယ်​တွင်း မှိုစွဲရာမှာကုသတဲ့​ဆေး​တောင့်​များ၊ မိန်းမကိုယ်​ ယားယံရာမှာ ကုသတဲ့
Amount of Menstrual blood and you health
DrMay ThantSyn	2018-12-17T15:07:25+00:00
ရာသီ​သွေးနှင့်​ သင့်​ကျန်းမာ​ရေး ရာသီ​သွေးဆိုတာ.. မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ အပျို​ဖော်​ ဝင်​ချိန်​ကစလို့... ရာသီ​သွေးဆုံးပီးချိန်​ထိ.. အမြဲ ကြုံ​တွေ့​​နေရမယ့်​ အရာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​.. ဒီ​တော့ ဒီလို ရာသီ​သွေး ဆင်းရာမှာ များခြင်း နည်းခြင်းနဲ့ လိုက်​ပြီး သင့်​ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးအ​ပေါ် အကျိုးသက်​​ရောက်​မှုအ​ကြောင်း ​ပြောပြချင်​ပါတယ်​... အများစုက​တော့
Choice of birth control methods in unmarried couple
DrMay ThantSyn	2018-12-17T09:34:51+00:00
လက်မထပ်မီ ကိုယ်ဝန်သန္ဓေတားနည်းလမ်းများ ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ ယဉ်ကျေးမှုတို့ ပြန့်နှံ့လာခြင်းသည် တားဆီးမရသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်လာသည် ။ အာရှ နိုင်ငံအတော်များများ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့နိုင်ငံများတွင်ပါ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆန်သည့် လက်မထပ်မီ အတူနေသည့် ဓလေ့များမှာ တဖြည်းဖြည်း များပြားလာနေသည် ။ သို့သော် ကျန်းမာရေးအသိ
Sexual aspect of childbirth
DrMay ThantSyn	2018-12-17T09:20:47+00:00
က​လေး​မွေးဖွားပြီး ​မေ​မေတို့ အန္တရာယ်​ကင်းစွာ ချစ်​နိုင်​ဖို့ အမျိုးသမီးအများစုဟာ က​လေးမီးဖွားပြီး ​မွေးလမ်း​ကြောင်းချဲ့ထား​သော ဒဏ်​ရာများ (သို့) ခွဲ​မွေးထားလျှင်​ ဝမ်းဗိုက်​​ပေါ်ရှိ ချုပ်​ရိုးဒဏ်​ရာများ​ကြောင့်​ နှစ်​ကိုယ်​တူ ချစ်​ပွဲပြန်​ဝင်​ဖို့ကို ထိတ်​လန့်​စိုးရိမ်​တတ်​ကြပါတယ်​။ ဒီလိုခံစား​နေရတဲ့ စုံတွဲ​တွေအတွက်​ က​လေး​မွေးဖွားပြီး သိသင့်​တဲ့အချစ်​အ​ကြောင်း​လေး​တွေ ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ က​လေး​မွေးဖွားပြီး ရက်​သတ္တပတ်​၆ပတ်​ကြာသည်​အထိ လိင်​မှု​ရေးရာ​လေး​တွေ